साजन घिमिरे ( काठमाडौँ डेस्क ) - बिहिबार, भदौ १o, २o७८ - 1213
तपाई अहिले नेपाल के कारणले आउनुभयो ?
लामो समय कोरोना भाइरसको कारणले नेपाल आउन पाएको थिइँन। नेपाल सरकारसँग संस्थागत कुराहरु पनि तय गर्नुपर्ने छ। र, गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनको तयारीका लागि पनि म काठमाडौं आएको हुँ।
हाम्रो आठ वटा विभागहरु छन्। जसमध्ये वैदेशिक रोजगार तथा कल्याकारी विभागको म प्रमुख हुँ। यो विभागमा चारवटा उप–कमिटीहरु छन्। यी कमिटीमध्ये पहिलो वैदेशिक रोजगारमा गएका साथीहरुको समस्या केलाएर नेपाल सरकारसँग लबिंग गर्ने, हाम्रो संविधानमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारसहित नागरिकता दिने भनेको छ त्यो नागरिकता हामीले पाएका छैनौं त्यसको लबिंग गर्ने, त्यस्तै, गैर आवासीय नेपालीहरुका लागि छुट्टै कानुन बन्ने छ त्यो कानुन बनाउनका लागि पनि मैले लबिंग गरिरहेको छु र विदेशमा रहेका नेपालीहरु जो महामारीको चपेटमा पर्नु भएको छ उहाँहरुको लागि हामीले थुप्रै काम पनि गरिरहेका छौं।
विदेशमा सिकेको प्रविधिहरु नेपालमा ल्यायौं भने चाँडै रुपान्तरण हुन्छ। अन्य देशहरु जसरी नै नेपालमा छिट्टै विकास हुन सक्छ। त्यसमा हामीले हरेक दुई वर्षमा एकपटक स्किल इनोभेसनका कन्फरेन्सहरु गर्छौं। गतवर्ष गरिएको कन्फरेन्समा ४१६ वटा पेपरहरु प्रस्तुत गरेका थियौं। हामीले ती पेपरहरुलाई तयार गरेर नेपालका सबै सम्बन्धित मन्त्रालय, विश्वविद्यालय तथा रिसर्च सेन्टरहरुमा दिएका छौं र हामी उहाँहरुसँग कनेक्ट हुन चाहान्छौं। विदेशमा रहेका नेपाली जो कुनै न कुनै विषयमा विज्ञ हुनुहुन्छ उहाँहरु जो नेपालमा वर्षको एक, दुई महिनाको लागि निःशुल्क रुपमा यहाँका अस्पताल, ल्याब, कलेज तथा क्याम्पसहरुमा पढाउन चाहनु हुन्छ ती विज्ञहरुलाई यहाँसम्म ल्याउने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौं।
आजको दिनसम्म एक लाख १० हजार जना संक्रमित भइसक्नु भएको छ। संघले हरेक व्यक्तिको तथ्यांक राखेको छ। ४ सय ८६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने करिब ९२ प्रतिशत संक्रमणमुक्त भइसक्नु भएको छ। पहिले जस्तो भयावहको अवस्था छैन। अहिले सबैजना कोरोनासँगै अघि बढ्न सिकिसक्नु भएको छ। यस्तै, सबैले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाइसक्नु भएको छ। त्यसैगरि, गैर आवासीय नेपाली संघले नेपालमा खोप तथा अक्सिजन ल्याउन धेरै पहल गरेको थियो। त्यही अनुरुप काम पनि भयो।
तपाईको उम्मेद्वारी चर्चा मात्र हो कि वास्तविक अध्यक्षको दाबेदारी नै हो ?
गैर आवासीय नेपाली संघको अभियान सुरु गर्दादेखि नै म यहाँ छु। सुरुका दिनमा म साधारण सदस्य मात्र रहेर काम गरे। २००७ मा रसियाको महासचिव थिए। त्यसपछि दुई कार्यकाल म केन्द्रीय सदस्य भए। २०१३, २०१५ मा कोषाध्यक्ष थिए। त्यसपछि दुई कार्यकालमा म महासचिव भएर काम गरे। त्यसपछि २०१९–२१ मा म उपाध्यक्ष छु। त्सकारण मैले एनआरएनएमा नसम्हालेको पद छैन। मैले यो सबै पदमा जितेर आएको छु। त्यसैले एनआरएनएमा रहेर थुप्रै काम गरेको छु। यो संघको विभिन्न पदमा रहेर कामलाई निन्तरता दिँदै आएको छु। त्यसैले कुनै चर्चा पाउनका लागि होइन मेरो दाबेदारी वास्तविक हो।
धेरै साथीहरुले भनेका छन्, एनआरएनमा वाैद्धिक, अनुभवी र सक्षम व्यक्तिको नेतृत्व चाहिन्छ। जुन योग्यता म मा छ। त्यसैले म मापदण्डमा पर्छु।